I-Web scraping inqubo ye-intanethi kubantu abafuna ukukhipha idatha ethile kwiiwebhusayithi ezininzi kwaye zigcinwe kwiifayile zazo. Ngokutsho kweHartley Brody (umbhali we-Ultimate Guide of Web Scraping), umqhubi wewebhu kunye nenkokeli ye-tech, ukukhwa kwewebhu kungaba ngamava anomnandi kwaye anenzuzo. U-Hartley Brody ulayishe iziqulatho ezahlukahlukeneyo kwiiwebhusayithi ezininzi, njengama-blog blogs kunye ne-Amazon.com. Ngamava akhe, waqonda ukuba nakweyiphi na iwebhsayithi inokutsalwa - ssl unblock. Ezi zilandelayo zizathu eziphambili zokuba i-web scraping ingaba ngamava amanandi.